Ushingi kubvunzurudzwa naMark Shuttlewoth [Humor] | Kubva kuLinux
Vanhu vanogara vachiwana <° Linux vanogona kunge vakaona kuti kune rimwe boka revashandisi (chaizvo 2 acho) izvo zvinopesana ne Canonical, Ubuntu uye zvese izvi zvinosanganisira.
Kubudikidza WikiFreaks kubvunzurudzwa kupfupi kwakaitwa nemumwe wevatinoda veTrolls masvondo mashoma apfuura Maka Shuttleworth, uye tinoda kugovana nemi mose. Ive kunyeverwa, kana iwe uine vana vadiki kana uri fanboys we Ubuntu, zvirinani usaverenge.
Ushingi: Kunyangwe iwe usingagamuchirwe, mangwanani akanaka. Isu tese tinoziva kuti iwe ndiwe ani, egocentric uye anoseka mukomana uyo anongofunga nezvekuita mari achibhadhara Ubuntosos, saka iwe haudi sumo.
Ushingi: Iyo pfungwa ine njodzi yaive yekugadzira Ubuntu?
Mako: Zvakanaka zvangu. Pandakaona izvozvo Debian Ini handina kukwanisa kuburitsa mari maari.
Ushingi: Uri bastard here? Saka iwe watoita zvako chinangwa, handiti?
Mako: Tenda kana kwete, mukomana, ndarasikirwa nezvakawanda kuyedza kuhwina zvimwe.
Ushingi: Ndiri kufara, asi ndiudze kana iro fuck Ubuntu zvichaenda here kubvisa?
Mako: Damn iwe !!! Ubuntu ichave yekusingaperi.
Ushingi: Ndakave nezviitiko zvakashata neako distro. Ubuntu Ungatombondirega ndichiishandisa ndisina zvipukanana?
Mako: Ini ndinofunga iyo Bug haina kubva Ubuntu, Chipembenene ndiwe. Ubuntu inoshanda kusvetuka kukuru palaptop yangu (Dell). Haisi mhosva yangu kuti iwe haugone kuwana yakanaka Hardware.
Ushingi: Sei wakaisa izvo Kusaziva -Handitombo rangarira zvazvinonzi- pamberi Canonical kana pakupedzisira uchiri chiso che Ubuntu?
Mako: Unoreva Jane silber. Iye ndiye CEO izvozvi, ini ndinongoramba ndichiita sarudzo dzekubata mabhora ako.
Ushingi: Zvakanakisa. Kutaura nezvezvisarudzo, chii icho hero iwe chawaifunga kana iwe wafunga kuzviita kubatana?
Mako: Mukuvandudza ruzivo rwevashandisi ve GNU / Linux..
Ushingi: Iwe unoreva, mukuteedzera $ teve Jobho $ pamwe chete naye Mac O $.
Mako: Kopa ishoko rakafara uye rinogona kunge rakashata kana kutuka. Ndinoidaidza kuti kukwereta mamwe mazano.
Ushingi: Asi zvidiki zvekusika iwe zvaunofunga Ubuntu pane zvawakaitira vanhu here?
Mako: Zvakanyanya. Ubuntu yakagara ichigadzira. Iyo yakagadzira uye ichaendesa chakanakisa chiitiko mukushandisa kwe GNU / Linux. Isu tinotora zvakanakisa zve Fedora o Debian uye tinoivandudza, tinoiwedzera uye tinoisa chitambi chedu pairi. Ipapo hatichengete uye isu hatigovane. Ndokusaka isu tiri vakanyanya.
Ushingi: Asi iwe unenge uri mwana we * & $ # @! # $ # @% &
Mako: Hongu, uye ini ndiri mamioneya uye iwe hausi.
Ushingi: Damn iwe !!
Mako: Zvimwe chete kwauri.
Nezvikonzero zviri pachena hativataurire zvakatevera kuitika. Paive nemhirizhonga, kushungurudzika uye kuiswa kwe Arch.. Ndinovimba makanakirwa.
Tinokumbira ruregerero nekukanganisa kune vatambi vanobatanidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Kubvunzana neushingi naMark Shuttlewoth [Humor]
Kungoti shit nekuseka xD. Zviripachena kwete kubva kuvanhu asi kubva kumamiriro acho ezvinhu, zvinongonakidza kwazvo xD
HAHAHAJAJAJAJA Mukuru HAHAHAJAJAJA !!!
Haha ikozvino chete iyo kubva kune imwe shamwari Eduar2 isipo, uye inotevera nguva ini handizopa pfungwa hahaha.
Nenzira, iwe ungadai wakatoisa mimwe miviri iyo ini handisi iyo anorexic hahaha
HAHAHAHAHA, elav, yakadii «mari» yakashinga Courage kuti iwe umutange iye stardom, ikozvino ivo vari kuzovarwira ivo sechibatiso CNN, Fox, BBC Mundo, nezvimwewo nezvimwewo, zvakanaka kwauri Ushingi , iwe wakunda vazhinji vavengi Ubuntu vashandisi, HAHAHAHA.
PD: Pakufunga kwechipiri, ndinofunga kuti chirevo ichi chaidiwa naElav asi aitya mhedzisiro uye akatsemuka.
Ini ndawana avo Ubuntu vavengi kubva muna Ndira nekupindura pa MuyUbuntu
ushingi hwakanaka kwazvo.
Wow kusvika rinhi 🙂
Wakaona here zvitsva pane saiti 😀?
Hahaha ndakaita chinyorwa uye pese pandinoiverenga ndinofungidzira Kushinga kupa muenzi kuna Maka hahaha.
Sekureva kwaFreud, ruvengo nerudo hazvisi zvinopesana nemashandisirwo epfungwa, asi zvese zviri zviviri zvinogona kuve mugumisiro weiyo isina kugadziriswa chinongedzo nechinhu chechido. Kana kutaurwa mune yakawanda mutauro mutauro: Unogona chete kuvenga chaunoda. Heh
Hazvina kumbobvira zvataurwa. Uye ini ndaigara ndichiudza Kushinga: Unoda Ubuntu.
Iye zvino achatanga kutuka, kupikisa uye zvese ... zvichave nekuti chokwadi chinorwadza, handiti? HAHA
Rudo? Kunyanya kusarudza inopinda iro izwi mumutauro wangu. Kana ndikakuudza huwandu hwevanhu vandakabvumidza kuisa iro izwi mumutauro wangu ... hahahahahaha.
Zvinotaurwa negumi nematatu zvinoita sezvine musoro kwandiri kune rimwe divi nekuti avo vanoverenga Linux mabloggi havadziviriri kuona zvinyorwa zveUbuntu (handiti zviverenge nekuti ini handiwanzo zviite izvo)
Yakatumirwa Mbudzi 19, 2011 pa5: 04 PM
Tarisai, yave nguva yakareba kubva pandakatanga kuita sepakutanga, zvichave nekuti ini handioni ubpoints
Shinga iyo «Reporter yegore» akahwina iyo Ubuntucito de oro, ndinoreva bhatani regoridhe diki, HAHAHAHA.
Ha ha ha ha ha, zvaive zvakanaka! Ndakaifarira kubva pamufananidzo, hilarious. Ini ndinofunga iyi blog yaisazove yakafanana pasina Kushinga. Ndinovimba pachave nekubvunzurudzwa kana zvinyorwa zvakaita seizvi, nerubatsiro rweKushinga
Kugona chose! Akangwara kwazvo uye anosetsa.
Kwaziso uye makorokoto eiyo blog!
Huya, kana mukuru wangu aripano
Ndichiri kuwana data ndinogona kupindura panguva imwe chete
Uye iwe haugone kuwana data kubva kuLinux? Ini ndinobvunza kuitira kana.
Icho chivindi pakupedzisira chinopedzisira chafarira hwindo HAHA
Ndiri kutora data kuisa Linux
Windows Xp? Manzwiro ako akakonzera kuti uore mwoyo uye ushandise Windows?
Mira kudzora moyo izvozvi izvo zvavanondipa hasha dzinenge mazuva ese
Ndatenda Pablo uye Gamuchirai kuDesdeLinux… ^ ^
Kutenda nekutambira Pablo, zvakanaka kuti uverenge imwe nhengo yeL pano 😀
Chikamu chekutanga chakandiuraya:
chivindi: Kunyange musiri kugamuchirwa, mangwanani akanaka. Isu tese tinoziva kuti iwe ndiwe ani, egocentric uye anoseka mukomana uyo anongofunga nezvekuita mari achibhadhara Ubuntosos, saka iwe haudi sumo.
hahahahahahaha kwandiri futi, ini shit nekuseka.
Kubvunzurudza kunotora rini Stevie Jobs?
Ndiko kuti ndinomuda zvishoma zvirinani pane murume uyu, asi ini ndichiri kumuda iye akaipa kupfuura Bill Gay.
Kutanga iyo Eduar2 inobvunzurudza Tito Maka, saka hapana mutemo wefunnel hahaha
Ini ndiri mumwe weiyo ubuntosos, asi kwete mumwe weavo vakabiwa, uye hahaha, iko kuseka. Ini ndinobvumirana netsikidzi uye kwandisingade kubatana.
WTF !!!!!!! ajajajajaaj izvo zvakakunakirai vana ahahahaha, ndichiri kuseka .. chokwadi, kutamba chokwadi chakanak kwazvo kunoudzwa ahahahahahahahahahahahahaha
Kubva kune nyika dzipi iyo Linux inogamuchira kushanya kwakawanda? + OS + Bhurawuza